HTC 10 အတွက် Oreo update ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်လည်း…. – AsiaApps
HTC 10 အတွက် Oreo update ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်လည်း….
January 15, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on HTC 10 အတွက် Oreo update ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်လည်း….
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်တုန်းကတောင် HTC U 11 မှာ Oreo update ရောက်ရှိလာတဲ့ အကြောင်းတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ website ကဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက U11 ပြီးရင် U ultra နဲ့ HTC 10 တို့ update ကိုထပ်ပြီးစောင့်မျှော်ရမှာလို့တောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့လူဆိုသိနေမှာပါ။ အခုတော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း HTC 10 အတွက် Oreo update ထွက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Oreo update အတွက် download (1.8 GB) ကို RUU နဲ့ over-the-air ကနေတဆင့်ရယူနိုင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစွာပဲ Oreo update ရောက်ရှိပြီး ခဏအကြာမှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် HTC ဘက်က Oreo Update link ကိုပြန်ပြီးပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။
အပေါ်ကပုံအတိုင်းဆိုရင် HTC ရဲ့ 10 အတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ Oreo Update ဟာ အသုံးပြုရတာအဆင်မပြေသေးပါဘူး။ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်တွေ ကြောင့် HTC အနေနဲ့ Oreo update link ကိုဖျောက်ပြီး ပြဿနာကင်းအောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ HTC 10 အတွက် Oreo update ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။ HTC 10 အသုံးပြုနေသူတွေအနေနဲ့ကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း HTC Oreo Update နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုထူးခြားမှုရှိရင် ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် မကြာခဏလာရောက်ကြ ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
HTC 10 Oreo update has been pulled pic.twitter.com/P9yqaKsLTg
— Greg Kiselyuk (@greg_kiselyuk) January 15, 2018
Android, Firmware Updates, HTC, Smartphone
နေ့စဉ်နေတိုင်း ဗဟုသုတရမယ့် စာတိုလေးတွေ အမြဲပေးပို့ပေးနေမယ့် Daily Random Facts
တစ်နေ့တာ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စ တွေကို မမေ့အောင် သတိပေးမယ့် TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner